[Mkpebi ahịa ọzọ! ] Ihe egwu egwu Kojiro Oka 2021 | Ota Ward Cultural Promotion Association
[Mkpebi ahịa ọzọ! ]Ihe egwu egwu Kojiro Oka 2021
[Mkpebi ahịa ọzọ! ]Ihe egwu egwu Kojiro Oka 2021 "Ezigbo egwu egwu"
[Mkpebi ahịa ọzọ! ] Site na kagbuo ọnọdụ ọnọdụ mberede, anyị ga -ere oche ndị ọzọ akwụsịla.
Ụbọchị mwepụta: Ọktoba 2021, 10 (Fraịde) 15:10-
Kojiro Oka, kpakpando na mba egwu Japan.
Anyị ga -anabata ndị ọbịa wee bụọ nnukwu ọnụ ọgụgụ egwu.
Biko nwee ọ theụ mgbe ị ga -eji ọmarịcha olu abụ na -egbu mmanya.
"Ihe niile m jụrụ gị (AL Webber)" site na "Phantom of Opera"
"N'abalị a (L. Bernstein)" na ndị ọzọ sitere na "West Side Story"
Ọbịa: Hiroko Kouda
OKA Pụrụ Iche Mgbakọ
Ụbọchị mwepụta ọzọ: Ọktoba 2021, 10 (Fraịde) 15:10-
SS oche 8,500 yen
S oche 7,500 yen
Otu oche 6,000 yen
B oche 4,500 yen
C oche 3,000 yen
Kojiro Oka (onye na -eme ihe nkiri, onye na -emepụta ihe)
Amụrụ na mpaghara Fukuoka.Akara m na Chinese na mahadum.Mgbe e mechara, o sonyere na ụlọ ihe nkiri Shiki dị ka onye otu oge. Na 1994, ọ nyochara maka ọrụ Enjolras na "Les Miserables" wee mee ọfụma ka ọ bụrụ kpakpando egwu nwere ọmarịcha ọmarịcha ya na ikike ịbụ abụ. Kemgbe 2003, ọ rụọla ọrụ nke Javert n'otu ọrụ ahụ wee sonye na "Les Miserables" maka afọ 17.Na mgbakwunye na egwu egwu, ọ na -ejikwa ike dị egwu na -eme egwuregwu kwụ ọtọ, TV (ihe nkiri NHK Taiga "Yoshitsune", wdg), redio, ihe nkiri sitere n'òtù egwuregwu zuru oke ruo n'ụlọ obibi, na ihe ngosi. CD wepụtara "mkpokọta ịhụnanya", "Ekpere" na "Kachasị Egwu" dị ka ọba egwu.Na mgbakwunye, na -eji ohere nke Miss Saigon, ọ hiwere "Miss Saigon Fund" ma na -anụkwa ọkụ n'obi maka ọrụ afọ ofufo.Prọfesọ nleta na Kyushu Otani Junior College.
Ọ gụsịrị akwụkwọ na Mahadum Tokyo nke Arts.Mgbe ọ rụsịrị ọrụ n'otu ụlọ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na Opera Training Institute of the Agency for Cultural Affairs, ọ kwagara Ịtali.Mgbe o merisịrị ọkwa dị elu n'ọtụtụ asọmpi mba ụwa, ọ nọwo na -arụ ọrụ na Roman Opera House, Stuttgart State Theatre, wdg, wee nwee nkwekọrịta pụrụ iche na Vienna Volksoper a ma ama.Mgbe ọ laghachitere Japan, ọ rụrụ ọrụ na New National Theatre, "The Tales of Hoffmann," "Rokumeikan," Biwako Hall, "Rigoletto," Nikikai, "The Magic Flute," "Der Rosenkavalier," na "Puritan. "Na mgbakwunye na egwu egwu na egwu egwu na mba niile, ọ na-etolite mmemme dị iche iche dịka agwa nke NHK-FM "egwu oge gboo" na MC na BS Fuji "Ntụziaka Ann". N’afọ 2018, iji mee ncheta afọ iri nke mpụta mbụ CD, a ga-ewepụta “ARIA Hana ruo Hana-Opera Aria Masterpieces”, na 10, a ga-ahapụ “Kono Michi-Japanese Song II-”.Enwetara onyinye nturu ugo nke 2020 nke Goshima Memorial Opera New Face Award na 14th Exxon Mobile Music Award Western Music Division Enugwu agbamume.Onye nnọchi anya ụgbọ mmiri nke atọ (onye nnọchi anya nkwalite ụgbọ mmiri). Emebere ka ọ kpọọ kpakpando na nnọkọ nke abụọ "Die Fledermaus" Rosalinde na Nọvemba 38 na Princess Kaguya na "Taketori Monogatari" na Ọdọ Mmiri Biwa na Jenụwarị 3.Onye otu Nikikai.